A họpụtara ụlọ ọrụ atọ maka TechPoint Mira Awards! | Martech Zone
A họpụtara ụlọ ọrụ atọ m na-esochi anya dịka ndị ikpeazụ Ihe onyinye onyinye nke Indiana:
Kpọmkwem Ngwaọrụ - obi abụọ adịghị ya na ọ bụ uto na ọmarịcha onye ndu na ụlọ ọrụ a ga-abụ onye ruru eru inweta onyinye ahụ. Enwere mpempe usoro ExactTarget nke na-emebi iwu nke physics na etu ha siri mepụta ma zipụ ozi ịntanetị. Ahụrụ m afọ 2 na ọkara ahụ m rụrụ ọrụ maka ExactTarget!
Na Monday, enwere m obi ụtọ ịkwụsị na-akparịta ụka Scott Dorsey, Onye isi oche nke ExactTarget, ọ dịkwa m ka agaghị m ahapụ. Enyere ya ike, nwee nchekwube ma na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe niile. Na o wepụtara oge iji hụ m bụ ihe ama na-egosi etu o si bụrụ ezigbo enyi na onye ndụmọdụ.
Site na ọkwa ọhụrụ m na Patronpath, m ka na-arụ ọrụ na ExactTarget dị ntakịrị. Ozugbo anyị na otu n'ime ndị ahịa anyị zuru oke, anyị ga-enwe nnukwu akaụntụ ExactTarget na-arụ ọrụ. Maka akaụntụ ahụ, ExactTarget mepụtara akụkọ ọdịnala maka anyị ka anyị wee nwee ike izipu ozi-e na nnọchite ndị nnọchi anya mpaghara ma nye ndị nnọchi anya akụkọ nke ihe ndị ahịa ha chọtara dabere na ntinye aka ha.
Ọ dị mma ịnwe ndị òtù ọlụlụ ochie na ExactTarget, ebe ha na-anabata nzaghachi m. N'ịbụ onye onye njikwa ngwaahịa ebe ahụ wee laghachi na ọrụ nke ndị ahịa bụ ngwaahịa bara ezigbo uru. (A sị na m nwere ike ịzụta nhọrọ m tupu m fuo ha!)
Anyị nwekwara akaụntụ Agencylọ Ọrụ na ExactTarget ma nwee njikọ dị ike, akpaghị aka maka ụlọ nri. On a nightly ndabere, na-enweghị mmekọrịta si ụlọ oriri na ọ weụ weụ anyị zipụ ọ bụla nke iri ma ọ bụ otú mkpọsa - ụbọchị ọmụmụ, ncheta, ọ dịghị mmekọrịta maka X ụbọchị, ịzụrụ ihe karịrị nke X dollar, wdg Ọ bụ a mma njigide usoro maka ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ.
Na, na - arụ ọrụ na Kọmitii Super Bowl 2012, M na - emepe emepe a Ntinye ngwa ngwa maka ndenye aha akpaaka site na WordPress blog site na ExactTarget. Ọ bụ ihe dị ka 80% zuru oke ugbu a - m na-arụ ọrụ na-anwa iwepụta ihe cron ọrụ.
Compendium Blogware - Mgbe Chris Baggott ka nọ na ExactTarget, anyị bidoro ịhụ ohere maka ngwa ịde blọgụ iji jikwa ọdịnaya mejupụta ma nye ezigbo ebumnuche maka Ngini Nchọgharị.
Ya na nwa m nwoke bidoro IUPUI, enweghị m ike ịwụnye n’elu Compendium mgbe Chris jụrụ. O nwere ike ịbụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị m mma. N'iji oke iwe na ọbụlagodi obere ekworo, m ga-anọdụ na-ele Chris na Ali Sales ka ha na-ewere Compendium gaa ahịa! Rịba ama: Ali Sales bụkwa ihe enyemaka na ExactTarget na akụkọ mmalite nke ChaCha… A na-ahọpụtakwa ChaCha!
Obi dị m ezigbo ụtọ na m nọ na nzukọ Satọde Starbucks ndị mbụ ahụ ebe anyị mepụtara okwu azụmahịa, agbanyeghị!
Nke a bụ mmalite N'ajụjụ ọnụ nke Chris na-ekwu okwu banyere Compendium:
Compendium na-eme ego nke abụọ ugbu a ma na-eto n'ike n'ike. Nchikota Nchọgharị Nchọpụta na arụmọrụ nke ịmepụta usoro maka ụlọ ọrụ iji mejuputa ịde blọgụ dị ọkụ ugbu a na Compendium dị na mbu. Mụ na Chris kwụsịrị izu ole na ole gara aga wee tụbara ya echiche ole na ole maka ngwaahịa ya.
Chris abụwo nnukwu onye ndụmọdụ nye m, Ali bụrụkwa onye isi mmụọ nsọ na-akpali akpali… ha mejuputara m n'ụlọnga nke m nke m ga-ebido n'oge adịghị anya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Compendium, biko jikọọ na m ozugbo na m nwere ike ime ka ị mara, “Gini mere naanị iji [Blogger, WordPress, Typepad, wdg.]. Ma ọ bụ i nwere ike debanye aha na Compendium's Akwụkwọ Akụkọ (mana ijide n'aka itinye m na ntụaka!) ma merie iPod Touch n'efu.
Patronpath - Ahịa na Ecommerce maka Industrylọ oriri na ọtaụ Resụ Restaurant - nke ikpeazu ma obughi ihe ozo bu onye oru m ugbu a. Patronpath na-enwe uto okpukpu atọ ugbu a. Dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ mkpa afanyekwa ha wallets n'ihi ụba ahịa na belata eri-esi nọmba, nanị ụzọ na-eto eto ha azụmahịa bụ na a siri ike na-ewere ma ọ bụ nnyefe azụmahịa.
Ordertụ Ntanetị etoola ụfọdụ ndị ahịa anyị kpọmkwem na-acha uhie uhie na nke ojii. Ọ bụ ezie na anyị bụ isi, anyị na-etinye nlebara anya dị ukwuu iji hụ na ndị ahịa anyị na-eji njikarịcha njin ọchụchọ ya na mmepe saịtị. O zughi ezu ịnye iwu n'ịntanetị, ị ga-ahụ ntanetị ịntanetị - otu isi nke ọtụtụ asọmpi anyị agbagharala.
N’ọnwa asatọ gara aga, anyị etinyego ụzọ POS dị iche iche dị iche iche 8, ụzọ mbanye ịkpọ oku siri ike, rụzigharịrị interface anyị iji belata ọnụego nnabata na itinye akwụkwọ ozi email mba turnkey maka otu n'ime ndị mmekọ anyị (nke akpọrọ n'elu na mmejuputa ExactTarget Enterprise anyị). Na otu ngosipụta nke ahụ ike anyị, otu nnukwu agbụ rịọrọ ka otu akụkụ nke sistemụ anyị mejuputa n'otu izu ụka. Otu ihe ahụ were ọnwa asọmpi iji mepee. Anyị enwetala ọtụtụ ihe na mmepe ugbu a ma anyị na-abanye na 4 na gbọmgbọm na-enwusi ọkụ!
Patronpath na-agbasiwanye ike na m na-agbasi ike na-akpaghị aka na (n'oge na-adịghị anya) na-enye ọnọdụ ọnọdụ nka nka na Bluelock iji nọgide. Anyi enweela onye mmepe mmepe nke mejuputara ufodu nnukwu ulo oru ecommerce na uwa niile (ma n'uwa niile) ma ekwenyesiri m ike na site na 2009, anyi aghaghi ibu agha n'ime ulo oru a. Nke bụ eziokwu bụ na anyị maara etu ahịa si arụ ọrụ, etu ecommerce si arụ ọrụ, yana etu ụlọ nri si arụ ọrụ - asọmpi a anaghịkwa adị.
Anyị etinyekwara Bird Marty nso nso a na mix. Echere m na Marty wepụrụ m 60% nke ọrụ m n'ụbọchị m jere n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ ihe obi ụtọ na-enweghị isi isoro ya rụọ ọrụ. Drivegbọ ya na-aga n'ihu maka mmelite na atụmatụ bụ kpọmkwem ihe anyị chọrọ n'oge a na Patronpath!
Rịba ama: eleghara ya anya Okporo ụzọ saịtị ahụ - anyị nwere onye ọhụrụ na-abịa n’ọnwa a!
Ekwesịrị m ịgbakwunye na abụghị m naanị njikọ dị n'etiti ụlọ ọrụ atọ a. Ga-achọpụta na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ahụkebe mbọn - ekele Kristian Andersen na otu. Kristian bụ ihe ịtụnanya Ihọd na-agba ọsọ a kediegwu ụlọ ọrụ na-enwe ike igbu ka mba ọzọ gị n'ụlọnga ma ọ bụ ndụmọdụ m na mgbe na-arụ ọrụ. Kristian na - enyere obere ụlọ ọrụ aka buru ibu, ọ kpọkọtara otu ọmarịcha ụlọ ebe a ime ya. Ọ bụkwa ezigbo enyi.
Tags: arkgbasaamkpakọrịta emarketingfacebook mgbasa ozilas vegasmiloogbako onyonyoime nnyochamkpebinta Indianambido izu ụkandị ọrụ ntanetịọrụ